Welcome to Aayaha Nolosha » HANKII JACEYLKEE HUNGOOBEY!!! (SHEEKO DHAB AH OO DHACDEY).
HANKII JACEYLKEE HUNGOOBEY!!! (SHEEKO DHAB AH OO DHACDEY).
February 2, 2019 - Waxaa Qorey : Mohamed farah -
Qalbi Jaceyl buuxiyey wey adagtahay sida uu uga baxo, naf aad u dooratey si dhab ahna lagama yaabo in aad nacdo, Cishqiga runta ah waa midka nolosha raad weyn ku yeesha, Kalgacalka laabta harsadana ma iloobi kartid.
Bashiir waxa ay naftiisu raacdey Basra oo uu u qaadey Jaceyl miisan leh kaas oo ay muddo Saddex sano ah wada jilayeen, waxa uu ahaa Kalgacal ku fidey badankiisa, waxaana si weyn uga warhayey dad badan oo aqoon u lahaa labadooda kuwaas oo tusaale u soo qaadan jirey marka laga hadlahayo Jaceylka iyo Sida uu u mudan yahay in la xaq dhowro.
Kalgaceylku Waa Qani
Caashaqa Ka Qaro Weyn
Qurux iyo Wanaag Badan
Waana Shey Ku Qaali ah
Bashiir oo dadka Cishqiga wax ka yaqaana ay indhihiisa ka garanayeen miisaanka uu leeyahay Xubiga uu Basro u hayo ayaa waxaa garab siineysay Basra Walaasheed oo la garab taagneyd wax walba oo ay islaheyd waad ku yagleeli kartaa Guri barwaaqo iyo nolol ay wadaagaan Basra iyo Bashiir oo isu hayey Jaceyl ugub ah.
Waxa ay ahaayeen kuwo u muuqda in ay labadaba yihiin dad isku kalsoon oo nafta isu huri kara oo diyaar u ah in ay Wadaagaan nolol macaan oo ku dhisan Caashaq Qaro leh, kuwaas oo aan Cishqi aan yareyn isu qaadey.
Calaf waa halkiisee ma jirin cid aragta oo aan taageerin Kalgacalka ay isu hayaan lamaanahan oo uu isku xirayo hogaan Cishqi.
Waxaa lagu tilmaamey Tusaale Caashaq oo kudayasho mudan iyo in ay yihiin kuwo ka gun gaarey libinta Kalgacalkooda Sanooyinka soo socdey.
Saddex Sano markii ay wadeen Jaceyka Xajmiga weyn lahaa ee u dhaxeeyey islamarkaana uu Bashiir Guri qalabeeyey kaas oo laba Sano Ijaar lacag badan ah kaga baxdey, Maadama ay Basra mar walba balanta dib u sii dhigeysay.
Iyada oo uu Bashiir ku wareersanyahay isbadalka balanta guurka Basra ay marwalba dib ugu dhigto ayaa ugu danbeyn Basra ay ka noqotey balantii oo sheegtay in ay badashey go,aankeedii ahaa guur iyo aroos la aqal galo.
“Anigu waan ka baxay Guurkaagii ee ha igu tashan” ayey si cad ugu sheegtay Bashiir.
Waxay qalbiga iyo niyada ka dishey wiilkii Jaceylka weyn u hayey ee naftiisa iyo hantidiisa ku aaminey, kaas oo Alaabtii arooska oo qaali ah Guri ijaar lacag badan ah ku bixinayey Muddo laba sano ah.
Dad badan ayaa arintii ka xumaadey oo u badnaa dadka Jaceylka ilaaliya, kuwa waraabiya Caashaqa, ee Ka hela in uu guuleysto Kalgacalka iyo Xubiga ka dhaxeeya lamaanayaasha isu haya Cishqiga runta ah.
Waa loo Xusul duubtey sidii ay ku guuleysan lahaayeen reerkii iyo guurkii lagu taamayeyna in uu noqdo mid hirgala.
Nasiib daro talo, waano, dadaal iyo heshiis walba oo gurmad loo galey waxaa la marin waayey Basra oo sheegtay in ayna marnaba ogolaaneynin guurka Bashiir oo ahaa Xabiibkeedii Tusaalaha loo soo qaadan jirey Jaceylka kala dhaxeeyey.
Si kasta haddii la yeelayna Basra waa diidey in uu guur dhexmaro iyada iyo Bashiir waxa ayna tiri
” Bashiir waa wiil da, yar mana ku aamini karo mustaqbalkeyga, mida kale Lacag malaha iyo Dhaqaale buuran”
Bashiir waxa ay ku kaliftey in uu faraha ka qaado balse waxa ay ka bixi weyday qalbigiisa Xubiga uu Basra u qaadey oo noloshiisa ayey ka mid noqotey iyada oo ku milantey Dhiigiisa.
Bashiir marka uu nafta u yaabey ayuu guursadey bal in uu ku iloobo inkastoo uu xaqiijiyey in Jaceylka ugu horeeya ee Qalbiga qofka gala uusan ka baxeynin xusuustiisa noloshiisana uu mar walba ay ku soo dhici taariikhdii iyo raadka uu ku leeyahay Sooyaalkiisa, waxa uuna isu arkey in Hankii Jaceylkiisa uu Hungoobey.
Basra weli ma ay guursan waxaana ay nafteeda ku aamini kartaa Qof lacag leh oo ay u aragto in uu mustaqbalkeeda hagaajin karo.. Nolosheedana Dabooli karo, waxaana ka maqan in wax walba uu Alle qorey oo maanta midka wax haysta uu berri weyn karo.
si kastaba ha ahaato ee Calafka ayaa hogaanka u haya guusha iyo guul darada lamaanaha is Jecel ee iswaaya ama is hela